Rehefa manoratra an'ity aho dia any amin'ny afobe izao. Manana mailaka 1,021 100 mbola tsy voavaky aho ary ny tsy valinteniko dia mihazakazaka amin'ny hafatra mivantana amin'ny alàlan'ny media sosialy, antso an-tariby, ary hafatra an-tsoratra. Mandefa mailaka 200 eo ho eo aho ary mahazo mailaka XNUMX eo isan'andro. Ary tsy ao anatin'izany ny famandrihana amin'ny takelaka tiako izay. Tsy voafehy ny boaty fampidirana ahy ary ny inbox aotra dia zava-misy tokoa amiko toy ny dinosazy mavokely. Nandefa taonina aho
Skoto dia serivisy tsotra izay manao zavatra iray - mamela anao handefa karatra paositra 4 × 6, feno loko namboarinao. Manome ny anao eo alohany sy any aoriana ianao, manome ny lisitry ny adiresy (afaka manampy anao izahay manangana azy na afaka manao izany ianao), ary hanonta carte postale tsara tarehy izy ireo ary handefa izany any amin'ny isan'ny mpanjifanao na ny mpanjifanao. 1.00 $ avy. Ny fomba fiasan'ny skoto manampy sary - Ampiasao ny